‘नेपाल सतर्क रहनुपर्छ’ - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारआइतबार, भाद्र १, २०७१
‘नेपाल सतर्क रहनुपर्छ’
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ)ले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेपछि इबोला रोग र संक्रमण फैलिन नदिन भइरहेको पहलबारे इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीसँग गरिएको कुराकानीः
इबोला संक्रमण भनेको के हो ?
अफ्रिकाको कंगो नदीको दुई शाखा मिल्ने ठाउँ ‘इबोला’ मा सन् १९७६ देखि फैलिएको रोगलाई इबोला भनिन्छ । वैज्ञानिकहरुले चमेरोबाट जंगली जनावरहुँदै यो रोग मान्छेमा संक्रमण भएको ठहर गरेका छन् । संक्रमितका शरीरबाट निस्किने रगत, पसिना, दिसा, पिसाब, थुक, वीर्य, यौनरसबाट यो रोग सर्छ ।
यो संक्रमण भएको कसरी थाहा पाइन्छ ?
यो रोग लागेपछि ज्वरो आउने, घाँटी खसखस हुने, खोकी लाग्ने, छाती, मांसपेशी र पेट दुख्ने तथा आँखा रातो हुने लक्षण देखिन्छ । शरीरमा धब्बा देखिने, झाडापखाला, बान्ता हुने तथा कलेजो र मिर्गौला ड्यामेज हुन्छ । र, अत्यधिक रक्तश्राव भएर मानिसको मृत्यु हुन्छ ।
यो संक्रमण नेपालमा फैलिने खतरा कत्तिको छ ?
इबोला संक्रमणले नेपाललाई छुँदैन भन्न सकिन्न । इबोला संक्रमणले सताएको अफ्रिकामा धेरै नेपाली छन् । तर, अफ्रिकासँग नेपालको सीधा हवाई उडान नहुनु सुखद् हो । ट्रान्जिट भएर नेपाल आउँदा अरु ठाउँमै रोकिने संभावना हुन्छ । तर, यहाँ पनि सतर्कता अपनाउन जरुरी छ ।
इबोला संक्रमण हुन नदिन सरकारले के गरिरहेको छ ?
अफ्रिकामा रहेका नेपालीलाई जोखिमजन्य ठाउँमा नजान भनेका छौं । इबोला भाइरस भित्रिन र फैलिन नदिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेल्थडेक्स राखेका छौं । अरु ६ वटा नाकामा पनि यस्तै हेल्थडेक्स राख्ने तयारी छ । शंकास्पद बिरामी फेला परे सीधै अस्पतालमा लैजान्छौं ।
संक्रमण भएमा नियन्त्रण गर्ने पनि योजना छ ?
इबोला संक्रमितको उपचार संभव छैन । बिरामीलाई रगत कम भए रगत दिने, ज्वरो आए औषधि दिने तथा अलग्गै र निगरानीमा राख्ने मात्र हो ।